अब कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर घट्दै जान्छ :डा. शेरबहादुर पुन
Home जीवन शैली स्वास्थ्य अब कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर घट्दै जान्छ :डा. शेरबहादुर पुन
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका स’रुवा रोग विषेशज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले अब क्रमशः कोरो’ना सं’क्रमण दर घट्दै जाने बताउनु भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा यतिबे’ला को’रोना भाइर’सको दरउच्च विन्दुमा पुगेकाे तर अबका दिनमा संक्रमण घट्ने उहाँको भनाइ छ । निषे’धाज्ञा अगाडिको भीड’भाड र जमघटका कारण कोरोना भाइर’सको संक्रमण दर अहिले उच्च भएको तर अहिले निषे’धाज्ञा जारी रहेकाले को’रोना संक्र’मण दर घट्दै जाने उहाँको ठ’हर छ ।
उहाँले भन्नुभयो, अहिले को’रोना सं’क्रमण दरलाई अधिकतम विन्दु मान्न सकिन्छ, निषे’धाज्ञाअगाडि मानिसहरु मिस’मास भए । भीडभाड र जमघट भयो, त्यसैले कोरोना संक्र’मणको दर उच्च भएको हो । उहाँहरुले घरघरमा लगेर सं’क्रमण थप बढाउनुभयो । त्यही कारण को’रोनाले अहिले क्षमता प्रद’र्शन गरिहेको हो । तर अब निषे’धाज्ञा जारी छ र संक्रमण दर घट्दै जानेछ ।’अहिले निषे’धाज्ञाका कारण सामाजिक सम्पर्क नहुँदा पनि बढ्नुलाई पहिल्यैको गतिवि’धिसँग जोडेर हेर्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ । पहिले सुरुवाति समयमै तरिका न’पुगेका कारण अहिलेको यो अवस्था भोग्नु परेको बताउदै उहाँले अहिले भने हेर्नु बाहेक अन्य वि’कल्प नहुने उहाँको भनाइ छ ।
एक दिन, दुई दिनको सं’क्रमण दरको तथ्याङ्क तलमाथि हुँदा त्यति फरक नपर्ने उहाँको भनाइ छ । दुई हप्तादेखि माथिको लामो समयावधि हेरेर तथ्या’ङ्क मानेर औसतमा हेर्दा त्यति फरक नदे’खिएकोले तत्काल कोरो’ना सं’क्रमण अब तीव्र बृद्धि हुने सम्भावना नभएको उहाँले न्यूज२४ सँगकाेकुराकानीमा बताउनुभयो । यद्यपि नि’षेधाज्ञालाई क’डाइ नगरे अवस्था यही हुन्छ भन्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । अहिले परी’क्षण गरिएकामा औष’तमा ४० देखि ४५ प्रतिशत मात्रै कोरोना सं’क्रमित दर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
Previous articleखुल्यो यस्तो रहस्य, कलाकार भीमा मैनालीका छोरा यसरी मारिएको रहेछ, सीसीटीभी फुटेज सहित
Next articleविपक्षीसँग ङिच्च दाँत देखाएर एमालेको वरिष्ठ नेता भन्दै हिँड्ने ?:प्रधानमन्त्री ओली
२४ घण्टामा १९३ संक्रमितको मृत्यु